Sidee ayey u muuqanaysaa SHAXDA ay garoonka ku soo geli doonto Kooxda Arsenal kulanka ay wajahayso Liverpool? – Gool FM
(Liverpool) 22 Agoosto 2019. Kooxda Arsenal ayaa u safraysa garoonka Anfield si ay halkaas ugu wajahdo Liverpool, kaddib markii kooxda reer London ay guulo soo gaartay labadii kulan ee ugu horreeyey horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Gunners ayaa doonaysa inay sii joogteyso guulaheeda kaddib markii ay ka soo adkaatay Kooxaha Newcastle United iyo Burnley, iyadoo macallin Unai Emery uu maanka ku hayo inuusan dhibco lumin si ay ugu dagaalamaan hanashada horyaalka kal ciyaareedkan.
Emery ayaa hadda go’aansanaya haddii uu Liverpool kula dagaalami doono xiddigihiisa da’da yar ama inuu la soo shir tagi doono kooxdiisa ugu adag.
Kooxda Arsenal waxaa ka dhaawacan kulankan Hector Bellerin (jilibka), Rob Holding (jilibka), Kieran Tierney (gumaarka) iyo Konstantinos Mavropanos (gumaarka), waxaana Gunners shaki laga galinayaa kulankan Granit Xhaka iyo Mesut Ozil.
Haddaba shabakadda ciyaaraha ee Sports Mole ayaa shaacisay sida ay u muuqan karto shaxda ay kooxda Arsenal ay kala hortagayso Liverpool kulanka ka dhacaya garoonka Anfield.